Sharks Amaahda Maxaliga ah ma yihiin khiyaano mise sharci? Siraha aad u baahan tahay inaad ogaato
Bogga ugu weyn Sharks Amaahda Maxaliga ah ma yihiin khiyaano mise sharci? Siraha aad u baahan tahay o Ogow
Sharks Amaahda Maxaliga ah ma yihiin khiyaano mise sharci? Siraha aad u baahan tahay o Ogow
Libaax badeedka deymaha ee maxaliga ah ma khiyaamo mise sharci? Aqoonta saxda ah ee tan kaliya kama badbaadin doonto inaad ku dhacdo gacanta shark yaasha amaahda maxaliga ah laakiin sidoo kale waxay kaa caawineysaa inaad sameyso go'aan lacageed oo wanaagsan.
Hay'adda Dhaqanka Maaliyadeed (FCA) waxay haysaa faahfaahinta dhammaan amaahiyeyaasha idman. Haddii dayn -bixiye aan lagu qorin inuu haysto oggolaansho hadda ah inuu lacag amaahiyo, lacag ha ka amaahan. Ma rabtaa inaad ogaato sababta? Akhri tan.
Fikraddan ayaa ka soo ifbaxday Mareykanka, in ka badan 19 -kiith qarnigii, markii dulsaarka dulsaarku yaraa oo deymaha yaryari faa'ido lahayn. Waqtigaas, deyn -bixiyeyaashaan u muuqda kuwa sharci -darro ah ayaa ka shaqeeyay xafiisyo habboon, waxay lacag ka amaahiyeen deyn -bixiyeyaasha sharciga ah qiimo jaban oo macquul ah, waxayna ku amaahiyeen qiime aad u sarreeya si sharci -darro ah dadka u baahan.
Sidaa darteed, sharkooyinka amaahda ee maxalliga ahi uma baahna hubinta taariikhda ama warbixinnada amaahda. Waxay amaahi doonaan lacago aad u fara badan iyagoo ujeedadoodu tahay inay helaan dulsaar aad u sarreeya muddo gaaban. Yaan lagu khiyaanayn muuqaalkooda saaxiibtinimo.
Haddii aad ka fekereyso inaad isticmaasho shark amaahda sababtoo ah lacag kuma amaahan kartid meel kale, waxaa jira tiro ururo ah oo bixiya talobixin deyn ah oo bilaash ah. Inta badan kiisaska ganacsi ee lala yeesho shark daynta maxaliga ah waa sharci-darro; waxaa fiican in la raadiyo beddelaad kale.
Waxaa laga yaabaa inay marka hore u muuqdaan kuwo saaxiibtinimo laakiin deyn ka qaadashadooda marnaba fikrad fiican ma aha. Ma rabtaa inaad ogaato qarsoodi ku saabsan nimankan amaahda ah ee maxalliga ah? Markaa, tani waa wakhti qaldan in laga boodo maqaalkan. Akhriska sii wad.
Sidee buu Sharks Amaahda Maxaliga u shaqeeyaa?
Sharkiga amaahdu waa amaahiyayaal sharci -darro ah oo inta badan bartilmaameedsada dakhligoodu hooseeyo iyo qoysaska quusta ah. Waxaa laga yaabaa inay marka hore u muuqdaan kuwo saaxiibtinimo leh laakiin iyaga oo wax ka amaahday marna ma aha fikrad wanaagsan.
Shark amaahda maxalliga ahi waa lacag -bixiye aan ruqsad u haysan oo ku dhex jira shabakad shaqsiyeed ama xirfadle ah oo bixisa si ay u bixiso amaahda dulsaar sare. Waxaa laga yaabaa in laga helo internetka, ama shabakadaha gaarka ah. Dhab ahaantii, dhaqaalahoodu badanaa wuxuu ka yimaadaa ilo aan la garanayn.
Nimankan amaahda ah ee maxalliga ah ayaa ku amaahin doona lacago aad u fara badan, iyada oo ujeedadu tahay in lagu helo dulsaar aad u sarreeya muddo gaaban. Tusaale ahaan, shark amaah ayaa ku amaahin kara $ 10,000, wuxuuna kaa dalban karaa $ 20,000 30 maalmood gudahood.
Sidoo kale, waa inaad ogaataa in dadka lacagta qaata ee ruqsada haysta ay nidaamiyaan Hay'adda Dhaqanka Maaliyadeed (FCA) waana inay raacaan xeerarka dhaqanka FCA.
Waa maxay sababta Sharks Amaahdu u xun yihiin?
Daanyeero amaahda maxalliga ah waxaa loo yaqaan 'amaahda amaahda'sababtoo ah waxay la mid yihiin xayawaanka; gardaran, xanaaqsan, oo hunguri badan. Sidaa darteed, waxay sameyn karo waxyaabo badan oo sharci -darro ah si loo helo dib -u -bixinta, sida afduubka ama xitaa dilka.
Qaar ka mid ah sicirrada khidmadaha sharkiga amaahdu waxay noqon karaan ilaa 1.5% maalintii. Waxa weheliya dulsaarka ay iyagu soo oogeen, waxay sidoo kale ka qaadaan khidmado dheeraad ah rabitaankooda.
XIDHIIDHKA: Raalli -ahaantu ma qaadataa Buugaag? Faallooyinka Wanaagsan 2022
Sida xaqiiqda ah, waxaa jira khataro badan oo ku lifaaqan amaahda sharkiga amaahda. Qaarkood waxaa ka mid ah:
Marka hore, waxaad bixinaysaa dulsaar aad uga badan intaad ku bixin lahayd amaah kasta oo sharci ah.
Marka labaad, waxaa laga yaabaa in lagu dhibaateeyo ama laguu hanjabo haddii aad dib ula noqoto bixintaada.
Marka saddexaad, waxaa laga yaabaa in lagugu cadaadiyo inaad lacag badan amaahato si aad mid amaah mid kale ugu bixisid, oo aad ku dambaysid deyn isdaba joog ah oo aadan marnaba bixin karin.
Halkii aad lacag ka amaahan lahayd nimankan amaahda ah ee deegaanka, fiiri 11 sharci oo Lacag lagu Siinayo Fursadaha Qoraalka 2022
Sida Loo Arko Shark Amaah?
Si aad u hubiso in deyn bixiye loo oggol yahay inuu amaahiyo lacag, waxaad baari kartaa Financial Conduct Authority xog -ururin iyo ka dukaameyso heshiisyada ugu fiican.
Waa hagaag, in la arko shark amaah ma aha wax adag. Xitaa haddii aad go'aansato inaad iyaga gacanta ku aragtid adiga oo aan caawimaad ka helin Financial Conduct Authority, talooyinka hoose ayaa ku caawin kara.
Shark amaah ayaa laga yaabaa:
bixi waraaqo yar ama aan lahayn, sida heshiiska amaahda ama diiwaanka lacag bixinta.
diido inaad bixiso macluumaad, sida dulsaarka ama inta lagugu leeyahay.
alaabta u qaad ammaan ahaan, sida baasaboorada, kaararka bangiga ama ruqsadaha baabuurka.
kordhiso daynta ama ku dar kharashyo dheeraad ah wakhti kasta.
cabsi gelin, hanjabaad ama rabshad.
Sida xaqiiqda ah, inkasta oo inta badan sharkiga amaahda ee maxalliga ahi ay sidan u dhaqmaan, qaar ka mid ah ayaa dhab ahaantii waxtar leh oo aan waxyeello lahayn. Dhab ahaantii, dayn -bixiye kasta, ruqsad haysta ama aan ruqsad haysan, oo ku dhibaya ayaa ku xad -gudbaya sharciga.
Waa inaad u soo sheegtaa shark kasta oo amaah ah oo ku xumeeya xafiiska Heerarka Ganacsi ee deegaankaaga iyo booliiska haddii sharkiga amaahdu kuu hanjabo ama uu isticmaalo rabshad.
Muxuu Sharcigu Ka Yidhi Sharks Amaah?
Waa dembi ciqaab ah in lacag la amaahiyo macaash iyada oo aan laysanka amaahda macmiilka, inkasta oo aysan sharci darro ahayn in laga amaahdo shirkad ama qof.
Talada ugu fiican ee wax ka qabashada sharkiga amaahda waa 'ha samayn'.
Sida Loo Soo Sheego Shark Amaah?
Si aad u soo sheegto shark amaah ah oo rabshad wata, waxaad samayn kartaa waxyaabahan soo socda, waxaadna filan kartaa jawaabta ilaah.
Ka wac Stoploansharks khadka tooska ah ee qarsoon 24-ka saac 0300 555 2222
Booqo website-ka www.stoploansharks.co.uk
U dir fariin buugga wejiga gaarka ah kooxda mashruuca sharks amaahda joogsiga ee www.facebook.com/stoploansharksproject
Sharks Amaahda Maxaliga ah ma yihiin khiyaano mise sharci?
In kasta oo sharkadaha amaahdu ay la mid yihiin riyooyinka dadka qaar, haddana iyagu waa barako kuwa kale. Si kastaba ha ahaatee, aqlabiyadda, waxay leeyihiin, waxay ku guuleystaan ​​codka. Inta badan amaahda amaahda ah waa khiyaano.
Hoos waxaa ku qoran faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka lacag laga amaahdo shark amaah:
Mararka qaarkood, shimbirahan waxay dhab ahaantii la mid yihiin Malaa'igta qaabka aadanaha oo caawisa shaqsiyaadka runtii u baahan lacag. Xaaladahan oo kale, shakhsiyaadkan ayaa laga yaabaa inay hore ugu guuldaraysteen inay dhaqaale ka helaan bangiyada ama ilo kale oo sharci, iwm
XIDHIIDHKA: Livewave Full Review 2022: Ka Digtoonow Sirahan.
Kuwa soo socda ayaa ah faa'iidooyinka sharkiga amaahda:
Dukumentiyada Hoose - Sharks -yada amaahdu ama uma baahna dukumentiyo kahor maalgelinta ama dukumiintiyada ay u baahan yihiin ayaa aad u yar.
Looma baahna Qiimeynta Deynta - Sharks -yada amaahdu uma baahna qiimeynta amaahda ee deyn -qaatayaasha ka hor inta aan la maalgelin.
Looma baahna Ammaan - Sida kor looga dooday, sharkiga amaahdu wuxuu ku maalgeliyaa shaqo sumcad leh iyo dhinacyo kale mana u baahna wax nabadgelyo ah.
Fikradayda, in kasta oo aysan sharci -darro ahayn inaad ka amaahato shark amaah ah, sidoo kale, wax sharci ah kuguma laha inaad dib u bixiso deynta, waa inaad had iyo jeer bixisaa lacag kasta oo aad amaahato. Waxay wax badan ka sheegaysaa daacadnimadaada iyo hufnaantaada.
Waa hagaag, sidaad ogtahay, wax walba, waxaa jira faa'iidooyin, iyo dabcan, faa'iido darrooyinka.
Siinta lacag si shaqsiyaad si fudud iyada oo aan wax dhib badan iyo dokumentiyadu la imaan faa'iido -darrooyinka qaarkood, kuwaas oo qaarkood lagu sharxay hoosta:
#1. Heerarka Xiisaha Badan
Heerarka dulsaarka ee laga qaado sharkyada amaahdu aad bay uga sarreeyaan dulsaarka ay qaadaan bangiyada bixiyeyaasha kale ee sharciga ah.
Guud ahaan, dulsaarka dulsaarka ay soo dallacsiiyaan amaahda waxaa lagu sheegaa asbuuc walba halkii ay ka ahaan lahayd sanadle. Tusaale ahaan, shark amaah ayaa ku amaahin kara $ 10,000, wuxuuna kaa dalban karaa $ 20,000 30 maalmood gudahood.
#2. Shuruudaha waa lagu wareersan yahay
Shuruudaha iyo shuruudaha heshiiska ay sameeyeen sharkadaha amaahdu inta badan waa jahawareer. Tan waxaa ku jira shuruudaha dib u bixinta, dulsaarka, iwm.
Dhab ahaantii, dulsaarka toddobaadlaha ah ee lagu xusay heshiiska ayaa laga yaabaa inuusan u muuqan mid sarreeya, laakiin kuwani waxay u tarjumi karaan dulsaar kaas oo 10 ilaa 20 jeer ka sarreeya dulsaarka sida waafaqsan heshiiska amaahda dhaqameed. Sidaa darteed, waa inaad si taxaddar leh u taxaddartaa markaad la macaamilayso sharkadaha deynta.
#3. Amaahdu way adag tahay in la bixiyo
Heshiisyada amaahda iyo shuruudaha waxaa loo qaabeeyey si aan suurtogal u ahayn in deyn -bixiyuhu dib u bixiyo deynta. Maadaama dulsaarka dulsaarka deyn bixiyeyaashu ay aad u sarreeyaan, dhammaan deyn -bixiyuhu wuxuu ku dhammaanayaa bixinta wuxuu ku wajahan yahay dulsaarka oo xaddiga aasaasiga ah way adag tahay in dib loo bixiyo.
Xaaladaha intooda badan macaamil ganacsi oo lala yeesho shark amaah oo maxalli ah waa sharci darro; waxaa ugu wanaagsan in la raadiyo beddello kale.
Maxaan Ka Samayn Karaa Deynta Shark Amaah?
Haddii aad lacag ka amaahatey shark amaah, waxyaabaha ugu muhiimsan ee la xusuusto waa:
Wax sharci darro ah ma aadan samayn oo aadan dhib kala kulmi doonin booliiska. Waa sharci darro in la amaahiyo lacag liisan la'aan, laakiin ma aha sharci -darro in lacag laga amaahdo shark amaah ah.
Uma baahnid inaad dib u bixiso lacagta. Haddii lacagta lagu amaahiyay si sharci darro ah, sharkiga amaahdu xaq sharci uma laha inuu soo ururiyo mana ku geyn karaan maxkamad si aad u soo celiso
Ha joojin bixinta shark amaah ah haddii aad ka welwelsan tahay ammaankaaga. Talo ka hel takhasusle ka hor intaadan go'aan gaadhin.
XIDHIIDHKA: 10 ka magaalo ee ugu qaalisan aduunka in lagu noolaado
Sideen ku ogaan karaa haddii dayn -bixiyuhu sharci yahay?
Had iyo jeer ma cadda haddii dayn -bixiyuhu si sharci darro ah u amaahiyo lacag, gaar ahaan haddii ay u dhaqmaan sidii ganacsi caadi ah.
The Financial Conduct Authority Khadka caawinta (FCA) ayaa kuu sheegi kara haddii meheraddu leedahay liisanka amaahda macaamiisha ee ansax ah. Waxaad ka wici kartaa 0800 111 6768.
Haddii aad haysato buug lacag -bixin ama heshiis muujinaya cinwaan ama lambarka liisanka, gacanta ku hayso marka aad soo wacdo.
Mararka qaarkood meheraddu waxay yeelan kartaa ruqsad amaah macmiil oo ansax ah taas oo u oggolaanaysa inay qabtaan hawlo maaliyadeed oo kale, laakiin maaha inay amaah bixiyaan. Waxay weli jebinayaan sharciga haddii ay amaahiyaan ama ururiyaan lacag.
Ma jiraan wax kale oo lagu beddeli karo amaahda sharkiga amaahda?
Xitaa haddii aad tahay qof dakhligiisu hooseeyo ama aad haysato qiimeyn deyn oo liidata, waxaa jira siyaabo nabdoon oo lagu heli karo lacag ama lagu dabooli karo kharashyada. Waxaa ka mid ah:
Ururka amaahda: Ururada amaahdu waa keydinta bulshada iyo iskaashatooyinka amaahda, halkaas oo xubnuhu ay ku urursadaan kaydkooda si midba midka kale wax u amaahiyo una caawiyo socodsiinta ururka deynta.
Caawimaad ka timaada Dawladda: Haddii aad hore u qaadanaysay faa'iidooyin gaar ah oo aad u baahan tahay deyn, fiiri haddii aad ka dalban karto Sanduuqa Bulshada Deyn Miisaaniyad oo aan dulsaar lahayn.
Bixiyeyaasha Adeegga: Bixiyeyaasha adeegga badankood waxay leeyihiin qorshayaal iyo deeqo loogu talagalay dadka u baahan kaararka gaaska oo lacag la'aan ah.
Waxa kale oo aad ku samayn kartaa lacag sharci online ah halkan
Haddii sharkadaha amaahda maxalliga ahi ay sharci yihiin iyo in kale, talada ugu fiican ee wax ka qabashada sharkyada amaahdu waa 'ha samayn'.
Waa lacag -qaatayaal aan ruqsad haysan oo ka qaata dulsaar aad u sarreeya marmarna adeegsada hanjabaad iyo rabshad si ay u cabsi geliyaan dadka aan bixin karin amaahdooda.
Arrinta la xariirta deymannada ma aha deymo iyaga laga helo, taa beddelkeeda, waa waxa dhacaya haddii aadan dib u bixin karin. Xusuusnow, meesha aad deynta ka hesho sidoo kale waa muhiim, waana ku samayn kartaa ama ku sumayn kartaa.
Waa Maxay Amaahda Doc Aan Jirin? Wax kasta oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Waa maxay Xayeysiiska Maragga? Sida ay u Caawin karto Ganacsigaaga
Megatyper waa nooc ka mid ah madal lacag-samaynta khadka ah waana meel kasta oo internetka ah laakiin, wax yar ka hor…
Blippi waa mid ka mid ah YouTubers-ka ugu caansan carruurta. Su'aasha soo jiidashada leh ee qof walba bushimihiisa ka saaran waa "sidee...
Bangiyada ugu Fiican Kanada 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Si aad u noqoto mid ka mid ah bangiyada ugu fiican Kanada maaha in lagu socdo beerta. Sida ugu fudud…